Na Itie oge Internet Radio na-na-mkpa mgbe ọ na-abịa n'ozuzu music ụlọ ọrụ na music ndị hụrụ ndị chọrọ ime ka n'aka na ọ needful na-mere na-enweghị nbudata ọ bụla ọzọ omume ma ọ bụ ọbụna ihe ọ bụla mpempe song ma ọ bụ yiri video. Windows Media Player na nke a kwa ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe omume na-abụghị nanị agbakwunyere ma ọrụ na-inweta ihe kasị mma pụta na ikwu na internet redio na-ege ntị. A nkuzi ga-emekwa ka n'aka na ndị nile dị otú ahụ ụzọ na-kpugheere onye ọrụ.
Part 1: Olee na-ege ntị online redio na Windows Media Player
Part 2: Olee idekọ redio si Windows Media Player?
Nkebi nke 3: Top 3 software na-ege ntị redio nke dị mma karịa windows media ọkpụkpọ.
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe atụmatụ nke Windows Media Player nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe atụmatụ site nnọọ ịnweta a ọkpụkpọ nke nwekwara achoghidi download mgbe niile. Iji mee ka n'aka na internet redio na-enweta na-ege ntị ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịrị ịgbaso ndị nkuzi na e dere dị ka ndị a iji jide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu nzọụkwụ na-ekwurịta okwu na nke kacha nta clicks na- chọrọ na nke a. The ndu bụ bụghị nanị dị mfe ma O nwekwara e Bilie screenshots na-achọrọ na nke a iji jide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu nkuzi na-abụghị nanị dere ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma na nke Steti nke usoro ngwa na e mere n'ime kacha nta na o kwere omume oge. Nzọụkwụ na-kwuru na-nnọọ zuru ezu na onye ọrụ maa adịghị ga-reinvent ụkwụ anọ na iji mee ka needful mere n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Usoro bụkwa mfe na okwu nke onye ọrụ nghọta dị ka novice ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na ndu na-etinyere na zuru iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe Filiks na-etinyere na nke a. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi onye ọ bụla nke nzọụkwụ kwesịrị leghara ha anya ma ọsọsọp dị ka ọ bụ nanị ụzọ nke na-eme n'aka na onye ọkọkpọhi kasị mma pụta n'ime oge ọ bụla ma ọlị.
1.The n'ọbá akwụkwọ mode nke Windows Media Player bụ na-enweta:
2.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na isi ihe Nchikota Alt + V bụ na-enwe iji jide n'aka na mgbasa ozi na ndu na-enweta:
3.The internet redio a na-ahụ ka a ga-enweta iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi chọrọ mere:
4.The ọrụ nwekwara ike ịnweta chọrọ ọwa redio iji jide n'aka na needful a mere kpam kpam na ojii na-egwuri:
Ọ bụ-ahụ kwuru na e nwere ọtụtụ iri puku omume na ike ga-eji na-eme ka n'aka na internet redio e dekọrọ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na okwu nke ndekọ. Iji mee ka n'aka na-arụpụta na-na akara na ihe ndị a chọrọ ndị ọrụ ọ na-gwara iji jide n'aka na Wondershare TunesGo ebudatara na arụnyere dị ka ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe N'ihi na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ na-kwuru na nke a bụ ihe kasị mma na maka otu ihe ahụ ọ bụla n'ime ha ga-ọsọsọp dị ka ha dị mkpa.
The Wondershare TunesGo bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe omume nke na-enye ohere onye ọrụ ka mmekọrịta na playlist na a zoputara na iTunes ma ọ bụ Android ngwaọrụ. Nke a na usoro a na-emelite na-akwado site na ụlọ ọrụ na maka otu ihe ahụ onye ọrụ mgbe chere ihu ọ bụla nke na mmekọrita mmelite ka ha na-arụnyere na na na ebudatara site usoro ihe omume na-akpaghị aka ikwe ka onye ọrụ iji na-enweta elu atụmatụ oge niile. Usoro bụ dị ka ndị nke ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma:
1. Download na insteall na Software Wondershare TunesGo
2.The onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na TuneIn redio a na-ahụ na-enweta na mgbe ahụ ụzọ ọba akwụkwọ> edekọ bụ na-enweta:
3.The ndekọ button bụ na-enwe iji jide n'aka na usoro-agwụ ka anya dị ka ndekọ button na-enwe na ngụ oge na-amalite:
Na-esonụ na-atọ redio software mmemme na-ọbụna mma karịa Windows Media Player ka ha na-agbakwunyere na nke kacha mma technology:
1. Readon TV, Movie na Radio ọkpụkpọ
Readon Corporation bụ Mmepe nke a stuning internet redio ọkpụkpọ nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe nhazi na ikwu na internet redio. The ọkpụkpọ bụ kpam kpam n'efu na maka otu ihe nbudata ruru bụkwa elu. Ọ bụ a ga-enwe n'ihi na ndị niile ndị ọrụ na-ike gwụrụ nke na-eji Windows Media Player.
Ọ bụkwa otu nke kasị mma redio Player na na-agbakwunyere na arụmọrụ nke na ndekọ na maka otu ihe ahụ ọ bụ ihe kasị mma n'ihi na ndị niile ndị ọrụ na-na a àgwà nke nbudata ma ọ bụ Ndekọ songs si online redio. The interface bụ onye ọrụ enyi na enyi na ọkpụkpọ bụ nnọọ free iji.
Ọ bụkwa otu nke kasị mma redio nke na-eme n'aka na ọ fọrọ nke nta ọ bụla format na onye ọrụ nwere ike na-eche nke a na-akwado na maka otu ihe ahụ ọ na-ahuta ka ndị kasị mma redio niile ugboro. The onyeōzi na mfe iji interface bụ a atụmatụ na a onye ọrụ apụghị ileghara anya na nke a na redio nwekwara e ọdịda nke steeti nkà ọrụ ọ na-ejere.
> Resource> WMP> 3 Atụmatụ maka redio Fans ka maka iji windows mgbasa ozi ọkpụkpọ